IINDIDI ZEZINTO ZOMGANGATHO WOYILO LWANGAPHAKATHI - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iindidi zeZinto zoMgangatho woYilo lwangaphakathi
Iindidi zeZinto zoMgangatho woYilo lwangaphakathi
Ukwazi ezona ntlobo zintle zomgangatho woyilo lwangaphakathi kubalulekile ukufumana okuninzi kulungiso lwakho lwasekhaya. Uhlobo oluchanekileyo lophahla alukuniki kuphela into yokuma kuyo, inokuba nefuthe lokuziva kwendawo yakho. Umgangatho omnandi kunye noomeleleyo wenza isiseko sokuyilwa kwegumbi lakho. Nazi ezinye zezinto ezithandwa kakhulu kumgangatho wegumbi lakho eboniswe kwezi ndlela zilandelayo:
Umgangatho wokhuni oluqinileyo ulungile kwaye womelele. Ubuhle bendalo kunye nokufudumala kweenkuni kufakwe kulo mgangatho, kunye nemibala kunye nemixube kuxhomekeke kuhlobo lomgangatho osetyenzisiweyo. Umgangatho wokhuni oluqinileyo inokuba novakalelo kubumanzi nangona kunjalo, okuninzi kunokubangela ukujija okanye ukujika kombala. Into ebaluleke kakhulu malunga nomthi onzima inokugqitywa ngaphezulu nangaphezulu ukwandisa ixesha lokuphila.
E-U.S. Abo banqwenela ukufaka umthi onzima kufuneka balindele ukuhlawula i- $ 3 ukuya kwi-8 yeedola zenyawo kwisikwere seentlobo eziqhelekileyo ezinemithi eqinileyo eqinileyo efikelela kwi-14 yeedola. Ukufakwa kobuchwephesha kuya kuba neendleko phakathi kweedola ezi-5 ukuya kwezi-12 ngeenyawo zenyawo. Funda ngakumbi malunga Iindleko zomthi okhuni Apha.
Ngomgangatho wokhuni owenziwe ngobunjineli, ufumana umthi ophezulu oxhaswa ngamaplanga okanye ngamaplanga ahlaziyiweyo ahlanganiswe nothuli lwamatye. Lo mxube wenza ukuba izinto zizinze ngakumbi kwaye zingabinakho ukubakho kutshintsho lobushushu okanye ukufuma emva koko zibe ngumthi onzima ococekileyo.
Uninzi lwabavelisi beenkuni benza i-self-locking flooring ecofa ngokudibeneyo ukufaka ngaphandle kwesikhonkwane okanye iglu. Oku kwenza ufakelo lube lula kakhulu emva koko unokucinga kwaye kunokugcina imali ebonakalayo kwinkqubo. Ungasathethi ke ngomthi wobunjineli wale mihla ubonakala unomtsalane kwaye kwezinye iimeko kufana ncam nomgangatho wokhuni olomeleleyo.
Iithayile zeceramic zenziwe ngomxube wodongwe kunye ne-shale ebhakaweyo kwaye yaqina eziko. Iithayile zeCeramic ziza ngeendlela ezahlukeneyo, imibala, ubungakanani kunye nokuthungwa kwaye ungadibanisa kunye nokudibanisa oku ukwenza umgangatho kunye neepateni zesiko. Iithayile zeCeramic ziza kwiindidi ezine ezahlukeneyo eziglasiweyo, i-porcelain, i-terracotta kunye ne-tile yekwari.
-Ithayile emenyezelweyo inesambatho esifana neglasi, elinemali engenamda kunye neentlobo onokukhetha kuzo.
Iithayile ze-Porcelain zihlala zisetyenziswa kwisicelo sangaphandle ngenxa yokuqina kwayo. Inokuthengwa i-glazed okanye ingafakwanga. Unokufumana ulwazi ngakumbi malunga I-porcelain vs tile yodongwe Apha.
-Ithayile yeTerracotta yithayile engatyibilikiyo enomtsalane we-rustic. Nangona kunjalo, ukuba yiterracotta engabhalwanga kufuneka itywinwe ukuthintela ukungcoliswa.
I-Quarry tile yiceramic engafakwanga ihlala inombala obomvu-mdaka onokumelana ngcono nesiliphu kuneethayile ezinombala.
Umgangatho we-bamboo wenziwe ngemigca yoqalo oludityaniswe lwenza imicu eqinileyo okanye iiplanga. I-bamboo inokubonakala ngathi ngumthi onzima kodwa eneneni yingca. Umgangatho woqalo intle kakhulu, inzima kwaye yomelele. Ithathelwa ingqalelo njengezinto ezizinzileyo njengoko izityalo zoqalo zikhula kwaye ziphinda zikhule ngokukhawuleza. Ixabiso lokuthenga kunye nokufaka i-bamboo lithelekiswa nomgangatho wokhuni oluqinileyo.
I-Travertine luhlobo lwelitye lekalika elenza imithombo ejikeleze imithombo eshushu. Amaminerali ayanyibilika kwaye ahlengahlengise ngokwamaleko ukwenza i-travertine. Kukho imibala eyahlukeneyo ngokokutsho kwezimbiwa ezikhoyo. Ukwahluka kwemibala yindlovu, i-beige, ibomvu bomdaka kunye negolide. I-Travertine kulula ukusika kwiimo ezininzi zesiko.
I-travertine isetyenzisiwe njengezinto zokwakha ukusukela kumaxesha aseRoma. Ngaphandle kwehlabathi elidumileyo laseRoma iColosseum lakhiwe phantse ngokupheleleyo nge-travertine. Ihlala isetyenziselwa iipatio kunye neendlela zegadi ikwasetyenziswa kakhulu kuyilo lwala maxesha. Ukusetyenziswa okuqhelekileyo ngaphakathi kubandakanya Iishawari zetrafti , ii-façades, splashes zangasemva, ukufakwa kodonga, kunye nomgangatho.
Ubunzima bempahla yomgangatho, i-laminate yomelele kakhulu, iyamelana namabala kwaye iyaphela, kwaye kulula ukuyifaka. Umgangatho weLaminate unomaleko ophezulu okhuselweyo ngeplastikhi yokugaya kwaye uxhaswe ngamanye amacwecwe eplywood okanye imicu ecinezelweyo. Iyafana nomthi wobunjineli kunye nocingo oluphezulu oluxhaswe yiplywood okanye ifayibha ecinezelweyo.
I-Laminate inokubonakala ngathi ingumthi wokwenene okanye ezinye izinto ezinje ngamatye, ithayile okanye ikhonkrithi kwaye inokuza ngemibala eyahlukeneyo kunye neepateni. Ziza iiphakheji njengeeplanga okanye iithayile kwaye zinokufakwa ngaphezulu komgangatho okhoyo ngaphandle kokusebenzisa iinzipho okanye iglu. Ngolwazi oluthe kratya, bona ezinye zeenzuzo kunye neengozi ze laminate vs umthi onzima Apha.
Umgangatho weVinyl ubhetyebhetye kwaye uthambile ngaphantsi kweenyawo - oku kungenxa yokuba phantsi kwawo kuxhaswe ngumaleko woluvo lwegwebu. Ngaphandle kwendlela abavakalelwa ngayo nangona kunjalo, bomelele kakhulu kwaye bomelele njengoko benomaleko wokunxiba kumphezulu ophezulu ongenabala kunye nonqabileyo. IVinyl ayinasondlo kwaye inokuza ngemibala eyahlukeneyo kunye neepateni. Enye i-vinyl inokufana ngokusondeleyo nokubonakala komthi okanye ilitye ukukunika imbonakalo oyifunayo.
I-Linoleum ithathwa njengokhetho olunobungqongqo kumgangatho wendalo. Le nto yenziwe ngezinto ezinokuphinda zenziwe, izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane ezinjengeoyile yethayile kunye nekhokho. Umbala wezimbiwa emva koko wongezwa kulo mxube ukwenza imibala eyahlukileyo etyebileyo. I-Linoleum iza kumaphepha, iiplanga okanye iithayile. Ngokuqhelekileyo zihlala zinamathele endaweni okanye zifake njengoyilo lomgangatho odadayo.
Kuyacetyiswa ukuba uthenge i-linoleum enesambatho sokukhusela ukunceda ukuthintela ukungcoliseka, kunye nokukrwela. Ngelixa i-linoleum phantsi ihleli, kuya kufuneka icocwe ngamanye amaxesha njengezinye iintlobo zomgangatho. Senze ukubhala phezulu ukucoca njani ilinoleum Apha.
Ilitye leMarble leNdalo
I-gloss egudileyo kunye nemibala eqaqambileyo yamatye endalo Umgangatho wemabhile Inika igumbi indawo entle nenesiphelo esiphezulu. Ilitye lendalo liyamelana namanzi kunye nokufuma kodwa liyaziva ukuba liyabanda kwaye liyatyibilika xa limanzi. Ilitye lendalo elinjengemabhile kunye negranite kufuneka litywinwe rhoqo emva kweminyaka emi-4-5 ukunceda ukumelana nokufuma kunye namabala angenzeki. Elinye ilitye elifana nelitye lekalika, okanye ilitye lentlabathi liza kufuneka liphathwe rhoqo.
Yenziwe ngelaphu elilukhuni, Ikhaphethi yenye yezona zinto zinokuhonjiswa kakhulu oza kuzifumana. Ifumaneka ngemibala eyahlukeneyo, uburhabaxa kunye neempawu eziye zahlala zikhethwa ukuba zithandwe ngumgangatho kangangeminyaka. Ngokwesiqhelo zenziwe ngoboya obulukiweyo okanye imicu eyenziweyo enjengeyiloni, ipolypropylene, okanye ipholiyesta. Inayiloni ngokubanzi ithathwa njengeyona mpahla ikhaphethi isetyenziswayo ngenxa yokuqina kwayo kunye nokufumaneka kweendlela ezahlukeneyo. Bona Okuninzi iintlobo zekhaphethi kubandakanya ukulunga kunye neengozi zabo apha.
Ukukhetha ukuba zeziphi iintlobo zomgangatho oza kuwusebenzisa kwigumbi ngalinye lekhaya lakho sisigqibo esibalulekileyo esinokuthi sichaphazele ixabiso laso kwakhona. Xa uthatha isigqibo sokubeka umgangatho kubalulekile ekuqwalaseleni uhlahlo-lwabiwo mali, ixabiso langoku lekhaya lakho, kunye nexabiso elithelekisekayo lamakhaya kwindawo ohlala kuyo. Ngale ndlela unokulungiselela ukwenza uhlahlo-lwabiwo mali lokuhlaziya olubandakanya iindleko zaphantsi komhlaba ukuze ufumane okuninzi kokulungiswa kwakho xa kwaye uthatha isigqibo sokuthengisa indlu yakho.
Ukuba ungathanda ukucwangcisa iprojekthi yakho elandelayo yokulungisa izinto ezahlukeneyo Isoftware yoyilo lwangaphakathi simahla Iinkqubo ezinokukunceda ube nomfanekiso-ngqondweni weentlobo ezahlukeneyo zophahla kwisicwangciso sakho somgangatho.
Utshintsha njani ifani yam
Ndixelela njani ubungakanani bendandatho yam
Komarov unxiba umama womtshakazi
Umama womtshakazi unxiba idolophu yaseKansas
blushmaid pink umtshakazi unxiba ixesha elide
Iindawo ezilungileyo zokutshata ecalifornia